That's so good, right?: Help (Episode 5)
“ဘာလဲချစ်လေး?” ကျွန်တော့်မှာစိုးရိမ်တဲ့အမူအရာတွေကို မထိန်းနိုင်မသိမ်းနိုင်ဘဲ မြတ်သူကိုမေးမိရပါတယ်။
မြတ်သူဘာစကားမှမဆို ကျွန်တော့်မျက်ဝန်းတွေကိုပဲ သူစိုက်ကြည့်နေရင်တော့ ပျော်ရွှင်နေတဲ့ ပုံပြင်တစ်ပုဒ်ကိုပဲ သူမြင်ရမှာပေါ့။ လှစ်ကနဲ သူ့မျက်နှာမှာအပြုံးတစ်ချက်ပေါ်လာတယ် အမျိုးတူလိင်တစ်ယောက်နှင့်ပဲ သာယာကျေနပ်မှုတွေ ပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ကို သတိထားမိရင်းထင်ပါ့။ အညိုရောင် ညှို့မျက်ဝန်းတွေနှင့် ကျွန်တော့်ကိုစိုက်ကြည့်နေတာများ သူ့လောက်ချစ်တတ်သူမရှိဆိုတဲ့ ဟန်နဲ့ပါလား။
“မင်းသိလား?” “တစ်ယောက်ယောက်ရဲ့ မျက်ဝန်းတွေထဲစိုက်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ သူဘာပြောချင်တယ်ဆိုတာ သိနေတဲ့ ခံစားချက် တွေကလေ…”
ကျွန်တော်သူ့ကိုဘာတွေပြောနေလဲဆိုတဲ့အကြည့်တွေနှင့် ပြန်ငေးကြည့်မိပေမဲ့ ဘာမှပြန်မပြောမိ။ မြတ်သူကတော့ ရှက်ရယ်ရယ်နေတာ များ ဟက်ဟက်ပက်ပက်ပါ။ ချစ်စရာအိမ်မွေးခွေးပုလေးက ကိုယ့်ကိုမျက်ဝန်းဝိုင်းဝိုင်းလေးတွေနှင့် ကြည့်နေတဲ့ပုံမျိုးလေးသာ ကျွန်တော့် ကိုယ်ဟန်အမူအယာက ဖော်ပြနေမိပါတယ်။ မြတ်သူက သူလုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေအပေါ် ပျော်ရွှင်ကျေနပ်နေဟန်တူပါတယ်။ ချိုချို လွင်လွင် စကားတွေ ဆက်တိုက်ပြောနေတာကို ကျွန်တော်က နားရွက်ကလေးထောင်ထားပေးရုံပေါ့။
“လာကွာ…သွားစို့” မြတ်သူကလောနေတယ်။ “မကြာခင် မှောင်တော့မှာကွ”
“ဟုတ်ပါပြီ၊ ငါတို့နှစ်ယောက် အိမ်ကိုတန်းတန်းမတ်မတ်ပြန်ဖို့ ငါစဉ်းစားနေပါတယ်”
ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးသား မတ်တပ်ရပ် အ၀တ်တွေကို ကောက်ယူဝတ်ဆင်လိုက်ကြပါတယ်။ ချွေးရွှဲပြီး မောဟိုက်နေတဲ့ ကျွန်တော်တို့တွေ လယ်တောပြင်နှင့်ဝေးရာကိုသွားတဲ့လမ်းစီ စပြီးလျှောက်လှမ်းကြပါတယ်။
စိုက်လိုက်မတ်တပ် လျှောက်လှမ်းနေတဲ့ မြတ်သူ့လက်ကို ကျွန်တော် ရုတ်တရက်ဆိုသလိုဆွဲကိုင်လိုက်ပါရဲ့။ မြတ်သူ ကျွန်တော့်မျက်နှာကို ပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်ရင်း လက်ကိုပြန်ဖျစ်ညှစ်ပါတယ်။ နှစ်ဦးသား မျက်ဝန်းခြင်းဆုံကာ ပြုံးမိလိုက်ကြပေမဲ့ ကျွန်တော့်မျက်နှာပေါ်က အပြုံးဟာ ကြာကြာမခံ စိုးရိမ်ကြောင့်ကြမှုနှင့်အတူ ပျောက်ကွယ်သွားမိပါရဲ့လေ။
ကျွန်တော် စကားပြန်မဆို မြတ်သူရဲ့ အခြားလက်တစ်ဖက်ကိုပါဆွဲကိုင်လိုက်ရင်း ထိတ်လန့်စိတ်တွေ မထိန်းနိုင်စွာ သူ့ကိုစကားပြော လိုက်ပါတယ်။
“မြတ်သူ၊ ငါ့ကို မင်း ကတိတစ်ခုလောက်ပေးစေချင်တယ်”
“ဘာကိုလဲ?” သူကတော့ ခပ်အေးအေးလေသံနှင့်တုန့်ပြန်တယ်ဗျ။
“ငါ့မိဘတွေ၊ ပြီးတော့ တခြားဘယ်တစ်ယောက်ကိုမှ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်မှုကို မပြောပြစေချင်ဘူး”
မြတ်သူ ဆွံ့အစွာရပ်တန့်သွားတယ်။ သူဘာပြောချင်မှန်း မသေချာစွာဖြင့်ပေါ့နော်။ ဒါပေမဲ့ သူပြန်ဖြေပါတယ်။ “ဘိုဘို၊ ငါ မင်းအတွက် တစ်ခုခုလုပ်ပေးရမယ်ဆိုရင် အမြဲလိုလို ငါလုပ်ပေးခဲ့ လုပ်ပေးချင်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့”
“ဘာဒါပေမဲ့လဲ မြတ်သူ……ပြောပါ ငါတောင်းပန်ပါတယ်ကွာ” ကျွန်တော်မထိန်းနိုင်စွာ စကားဖြတ်ပြောလိုက်တယ်။
“ဒါပေမဲ့!!” မြတ်သူက ဒီစကားကိုပဲ အသံကျယ်ကျယ်နဲ့ထပ်ပြောပါတယ်။ “ဒီကိစ္စက ဖုံးကွယ်ထားစရာကိစ္စတစ်ခုလို့ ငါမထင်ဘူး ဘိုဘို။ အရေးပါတဲ့ ဆက်ဆံပါတ်သက်မှုတစ်ခုကွ”
“ဟုတ်ပါတယ်…..ငါသိပါတယ်ကွာ။ ဒါပေမဲ့ ဘယ်သူ့မှ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကို မသိမကြားစေချင်သေးဘူး”
“ဘယ်အကြောင်းကိုလဲ?” မြတ်သူက စိုးရိမ်မကင်းတဲ့လေသံနှင့် ထပ်မေးတယ်။
မြတ်သူ့မျက်ဝန်းတွေက စိုးရိမ်မှုနှင့်အတူ စိတ်ထဲရောထွေးသွားဟန်ဖော်ပြနေပါတယ်။ ကျွန်တော့်မျက်ဝန်းတွေကို ငေးကြည့်ရင်း စူးစမ်း နေတာများ Puzzle တစ်ခုကို အဖြေထုတ်နေတဲ့ပုံစံမျိုး။ သူ့ဦးနှောက်တွေ Overtime ဆင်းပြီး ပိုအလုပ်လုပ်နေရတဲ့အတွက် ထင်ပါတယ်။ ဘာကိုလူတွေသိမှာ စိုးရိမ်နေတာလဲ? လယ်စောင့်တဲကြီးထဲပိတ်မိတဲ့အကြောင်း ဒါမှမဟုတ် အတူတူရှိနေခဲ့တဲ့ အကြောင်းလား? နုညံ့ သော….ငြင်သာသော….အားလျော့….စိုးရိမ်စိတ်ကဲသော အမေးစကားတွေထွက်လာပေမယ့် ကျွန်တော်ကတော့ မြေပြင်ကိုသာခေါင်းငုံ့ ကြည့်မိရဆဲပါ။
“ငါတို့…..ငါတို့အကြောင်းကို မင်းမသိစေချင်ဘူးဆိုရင် ငါတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ပတ်သက်မှုအပေါ် ဘယ်လိုခံစားရမှာလဲ ဒါမှမဟုတ် မင်း လယ်တောအိမ်တဲမှာ ပိတ်မိတဲ့အကြောင်းကို ဖုံးကွယ်ထားချင်တာလား?”
“ဘိုဘို….ဘိုဘို ဘာပြဿနာရှိလို့လဲကွာ။ ငါ့ကို ရှင်းရှင်းပြောပါလား….အဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးဆိုရင်တော့ ငါမလုပ်နိုင်ဘူးဗျ။ မင်းကို ဘာကူညီ ရမှာလဲ? မင်းအဲသည်လို ငြိမ်မနေနဲ့လေ ငါပြောတာကောကြားလား?”
“ငါ….မင်းကိုပြောပြချင်ပါတယ် မြတ်သူ၊ ဒါပေမဲ့ ရှုပ်ထွေးလွန်းတယ်”
ကျွန်တော်နားလည်ပါတယ် သူဘယ်လိုခံစားနေရတယ်ဆိုတာ။ သက်သောင့်သက်သာမရှိ၊ စိုးရိမ်စရာ အဖြစ်အပျက်တွေရင်ဆိုင်ရတော့ မှာလား? အတွေးမျိုးစုံရောယှက်နေတဲ့အကြည့်တွေကို မြင်နေရပါတယ်။ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲမှာ ခံစားနေမိတာက ထူးဆန်းတယ် မပြောရုံ တစ်မယ် လယ်တောစပ်က မြက်ခင်းပြင်ပေါ်ဖြစ်ခဲ့တာ တခြား…ဟုတ်တယ် တခြားသောဟာတွေအားလုံး အရင်က မဖြစ်ပျက်ခဲ့ဖူးဘူးလို့ ယူဆချင်ပြန်နေတာပါ။ သူ့အတွက်ပြဿနာက ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကြား ပေါင်းသင်းဆက်နွယ်မှုအပေါ် အသိအမှတ်ပြုမှုမခံရမှာ ကို စိုးရိမ်စိတ်ကဲနေတာထင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်သိပါတယ် မြတ်သူ့ကိုယုံကြည်နိုင်ခဲ့တယ်လို့လေ။ ဒါကျွန်တော် အဦးဆုံးသတိပြုမိတဲ့အရာပါ။ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်း ကျွန်တော့်ချစ်သူဖြစ်ရခြင်းကလည်း ယုံကြည်ကိုးစားမှုအပြည့်ရှိနိုင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကူညီဖို့၊ အဆင်ပြေအောင် လုပ်ပေးဖို့ဆိုတာ မြတ်သူရဲ့သံယောဇဉ်တွေဖြစ်မယ်။ အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းကောင်း၊ လိုအပ်ချိန်တိုင်း လိုအပ်နေဦးမယ့်လူလို့ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲ ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်။
“ဘိုဘို၊ It’s ok ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ငါ့ကိုပြောနိုင်တယ်ကွာ”
ဒီလိုစကားမျိုးက သူ့ကိုချစ်စကားဖွင့်မပြောခင်ထဲက ကျွန်တော်ကြားဖူးပြီးသား။ မြတ်သူရဲ့ ဒီတစ်ခါတုန့်ပြန်မှုကတော့ သက်သောင့် သက်သာမဟုတ် သိလိုစိတ်ပြင်းပြစွာ မသိရတော့မယ့်အကြောင်းအရာကိုသိချင်နေတဲ့အတိုင်းပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ အရှုပ် အထွေးတွေက ရုန်းမထွက်နိုင်ဘူးဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးက အမှိုက်ပုံးဖြစ်နေဦးမှာ။
ဟူး….မပြောဘဲနေရင်လည်း မြတ်သူ့စိတ်ထဲ မရေရာ မသေချာမှုတွေကို ပိုမိုဖြစ်တည်စေဦးမှာပါ။
“အိုကေ…..မြတ်သူ” ကျွန်တော် မြတ်သူရဲ့မျက်ဝန်းတွေကိုသေချာစိုက်ကြည့်ပြီးစကားစလိုက်တယ်။ “ငါ မင်းကိုပြောမှာပါ မြတ်သူ၊ ဒါပေမဲ့ ငါတို့နှစ်ယောက် လယ်တဲအိမ်ဝန်းကျင်မှာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ကိစ္စကို ဘယ်သူ့ကိုမှမပြောပြဘူးလို့ မင်းကတိပေးနိုင်မလား?”
“ကောင်းပြီ” မြတ်သူက ကျွန်တော့်ပြောစကားကို တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ပဲ လက်ခံခဲ့ပါတယ်။ “ငါ ဘာကိုမှ မပြောဘူးကွာ”
ကျွန်တော် အသက်ခပ်ပြင်းပြင်း ရှိုက်သွင်းလိုက်တယ် တစ်ချက်။
“ဟူး… မင်း ငါgayဆိုတာ ကောင်းကောင်းသိတယ်” ကျွန်တော် သက်ပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်ရင်း ပြောလိုက်တာပေါ့နော် သူ့ကို။
“ကောင်းကောင်းကိုသိတာ” မြတ်သူက တည်ငြိမ်တဲ့လေသံနှင့် တုန့်ပြန်ပါတယ်။
ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုပြီးမှ မြေပြင်ကို ခဏစိုက်ကြည့်ကာ ဘယ်စကားလုံးနှင့် သင့်တော်မလဲ ကြိုးစားတွေးတောမိပါရဲ့။
“အင်း……မင်း…..မင်းဟာ ငါ့အတွက် တစ်ယောက်တည်းသောသူ……ပြီး…..ပြီးတော့”
“ငါ….ကလပ်မှာရှိတဲ့ ညတုန်းက မင်းဖြစ်နေတာကို ကြည့်ကတည်းက ပုံဖမ်းလို့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မင်း လူတိုင်းလိုလို တစ်ချိန်ချိန်တော့ ပြောခဲ့ဖူးမှာပဲ ဟုတ်တယ်ဟုတ်” မြတ်သူက အမေးထုတ်တယ်ဗျ။ “ဟေး…ငါ အခုခံစားနေရတဲ့အခြေအနေကလည်း အဲဒီအချိန်ကနဲ့ အတူတူပါပဲ။ မင်းကလွဲပြီး ဘယ်သူမှ ငါ့အကြောင်းကို မသိဘူး။ ဟုတ်တယ်…..ဟုတ်ပါတယ် ငါဟာ bisexual တစ်ယောက် ….အင်း ငါ့အထင်ပါ။ ပြီးတော့ gay စစ်စစ်တစ်ယောက်ရဲ့ ပုံစံနှင့်တော့ နည်းနည်းခြားနားမယ်။ ငါ လူတိုင်းနည်းပါးကို ပြောပြဖြစ်မှာပါ ငါ ဘာဆိုတာ”
မြတ်သူ တခြားဘာမှမပြောခင် ကျွန်တော်စကားဖြတ်ပြောလိုက်ပါတယ်။
“Yeah! ဒါပေမဲ့ အဲဒါက ငါ့အတွက် ခပ်ရိုးရိုး မဖြစ်ခဲ့ဘူးလေ”
“မင်းက ဘာအကြောင်းကိုပြောနေတာလဲ ? မင်းအဲဒါဖြစ်နေတယ်ထားဦး လူတွေကို ရှင်းပြလိုက်ရုံကလေးပါပဲကွာ။ သူတို့ နားလည်မှုပေးမှာ…”
“ဒါပေမဲ့……ရှင်းပြရုံလေးပဲ?” လူတိုင်း နားလည်မှုမပေးနိုင်ပါဘူး။ လူတစ်ချို့ကတော့ မုန်းမှာ။ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေအားလုံးက အမှားအယွင်းတွေ….သဘာဝကိုမကျဘူး….အရူးတွေလို့ သူတို့ထင်ကြမှာပါ”
“မဟုတ်ပါဘူး။ ငါ အဲ့လိုတော့ မစဉ်းစားမိပါဘူး….ဒါပေမဲ့”
“ဒါပေမဲ့က ဘာလဲ? ဒီအချက်တွေအားလုံးနဲ့တော့ မဟုတ်သေးဘူး မဟုတ်လား? ငါ့ကိုယုံစမ်းပါ ဘိုဘိုရာ လူတွေက မင်းအကြောင်းတွေ ကို ဂရုတစိုက်ရှိတယ်ဆိုရင်….ထားပါ အဲလို စပ်စပ်စုစုရှိတဲ့သူတွေလည်းရှိတာ ငါသိတယ်။ မင်း gay ဖြစ်တယ်ဆိုတာနဲ့တင် သူတို့ အတွက်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်မသွားလောက်ပါဘူး။ သူတို့ဂရုစိုက်နေရင်လည်း မင်းပျော်ရွှင်နေရင်ပြီးပြီလေ။ သူတို့ ဂရုစိုက်ပြီး စပ်စုအပုပ် ချနေလည်း မင်းပျော်ရွှင်နေတာနှင့်စာရင် ဘယ်ဟာက ပိုအရေးကြီးလဲ…..ပြော?”
“ဒါပေမဲ့ သူတို့ ဂရုစိုက်မှာ သေချာတယ်ကွ!!!!”
ကျွန်တော် စိတ်လက်မာန်ပါ သူ့ကိုအော်ဟစ်လိုက်ပြီး စတင်ငိုကြွေးမိပါတယ်။ မျက်ရည်များဟာ ကျွန်တော့်မျက်နှာပြင်အနှံ့အရွှဲသားပါပဲ။ လမ်းမတလျှောက် အသားကုန်ပြေးတာ မြတ်သူ့မြင်ကွင်းကနေ လှစ်ကနဲပျောက်ကွယ်သွားလောက်အောင်ပါပဲဗျာ။ ငိုကြွေးတာကလည်း ပိုပိုစိတ်ပါလာရပါတယ်။
ဘိုဘိုဘာဖြစ်သွားတာလဲ နားမလည်ပါဘူး။ ဘိုဘိုတစ်ယောက် ဘာတွေကြောင့် ဘယ်လိုခံစားချက်တွေနှင့် ဆက်ဆံရေးတစ်ခုကို ဖုံးကွယ်ထားချင်နေရတာလဲဗျာ။ သူ ရှေ့ကိုတအားပြေးထွက်သွားတယ်။ နောက်ကနေ အပြေးလိုက်ရတာများ ဒီနေ့အတွက် တကယ့် မာရသွန်ပါပဲ။
“ငါ့ကို တစ်ယောက်တည်းထားခဲ့ကွာ၊ မင်းငါ့ကို နားမလည်ပါဘူး မြတ်သူရာ”
“ဟုတ်ပြီ….ဟုတ်ပြီကွာ ငါမပြောဘူး” သက်ပြင်းမောကြီးချမိရပါတယ်။ ဘိုဘိုရဲ့အသိရခက်တဲ့ပြေးလွှားမှုကို ဘာကြောင့်လဲဆိုတာ အဓိပ္ပာယ်ဖော်ဖို့ ကြိုးစားမိရရင်းပါ။ “ဒါပေမဲ့….ဒါပေမဲ့….မင်းငါ့ကိုဖွင့်မပြောခဲ့ရင် နောက်ပြီး….နောက် ငါမပြောတော့ဘူးကွာ…”
ဘိုဘို တကယ့်အရှိန်နှုန်းမြင့်စွာပြေးထွက်သွားပါပြီ။ ဟား…သူ့ကိုမမြင်စေချင်၊ အကြောင်းပြမေးမြန်းမှုတွေကို မကြားချင်တော့ သယောင်ပါ။ မြန်နိုင်သမျှ မြန်နိုင်သမျှ ပြေးတာများ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၄နာရီအတွင်း လယ်တောပြင်ထဲက တဲအိမ်တစ်လုံးထဲအပိတ်ခံ ထားရတာကြောင့် အားရအောင် အရှိန်မြှင့်နေသလားထင်ရပါတယ်။ နှစ်ဦးသားကြား စကားမပြောဖြစ်တော့ သူ့အပြေးနှုန်းနောက်က လိုက်ပြေးရတာကလေ နောက်က ခွေးဆိုးတွေ အသားကုန်အလိုက်ခံနေရသလိုပဲဗျာ။
အိုး…..သူ အဝေးပြေးကားလမ်းရှိတဲ့ တောင်စောင်းဘက်ကို ပြေးသွားတာ….။
“ဘိုဘို!!!” ကျွန်တော်လှမ်းအော်လိုက်တယ်။ “ဘိုဘို…စောင့်ဦးလေကွာ”
“ငါတစ်ယောက်တည်းနေပါရစေ….မင်း ငါ့ကို နားမလည်ပါဘူး မြတ်သူရာ”
“မဟုတ်ဘူး!!! မင်းမှန်ပါတယ် ငါသိပ်နားမလည်ဘူးဆိုတာ” သက်ပြင်းမောကိုချပြစ်လိုက်ရပါတယ်။ ဘာကြောင့်သူ အဲ့သည်လောက် ခံစားပြီး ပြေးထွက်သွားရမှန်း ကျွန်တော်ဖမ်းမမိဘူး။ “ဒါပေမဲ့!!! မင်း…..မင်း ငါ့ကိုပြောမပြခဲ့ဘူး…..ပြီးတော့…..ပြီးတော့ ငါမပြောဘူး မလုပ်ဘူးကွာ မင်းသဘောမကျရင်”
ဘိုဘို အပြေးနှုန်းကို ပိုမြှင့်သွားတယ်။ သူ့ကိုမြင်ရဖို့ ခွင့်မပြုချင် သိချင်နေတဲ့အကြောင်းပြချက်ကို သူမပြောချင် နှစ်ဦးသားကြား တိတ်ဆိတ်မှုနှင့်သာ။ မြန်နိုင်သမျှမြန်မြန် သူပြေးတာများ လယ်တောအိမ်ထဲ အပိတ်ခံထားရတာကြာလို့ အားရှိနေသလားမှတ်တယ်။ သူ့နောက်ကနေ အပြေးလေးလိုက်သွားပေမဲ့ မှီတော့မမှီနိုင်သေးပါဗျာ။ မြင်တော့ လှမ်းမြင်နေရပါတယ် ခပ်ဝေးဝေးကနေပေါ့… ဟော….. Shit!! ကုန်ကားတစ်စီး….ကုန်တင်ကားတစ်စီး အဝေးပြေးလမ်းဘက်ကနေ ချိုးကွေ့မောင်းလာတယ်။ ဘိုဘိုနှင့်ဆိုရင်….. ဘိုဘိုနှင့်ဆိုရင် “ဘိုဘို!!! သတိတား….” အော်နိုင်သမျှ အသံကုန်အော်ဟစ်ပြီး စူးစူးရှရှ သတိပေးမိတာပါ။
ဘိုဘို သူငိုနေတာရော ပြေးနေတာရော အရှိန်လျော့ကာ ထရပ်ကားကြီးလာရာကို ကြောင်ပြီးကြည့်နေတယ်။ ၀မ်းနည်းနေတာ အရှက် သည်းနေတာ ဖုံးကွယ်ချင်နေတာတွေ အဝေးရောက်ကာ ထိတ်လန့်ရင်ဖိုဖွယ်အဖြစ်ကို သူမျက်နှာခြင်းဆိုင်နေရပြီ။ ကားသမား…. ဟုတ်တယ် ကားမောင်းသမားကလည်း ကားအရှိန်လျော့ကာ ဘရိတ်အသားကုန်ဆွဲလေပြီ။ ကားနှင့် လူတိုက်မိကာနီးအချိန်မှ ဘိုဘို သတိဝင်ကာ နောက်ကိုခုန်ဆုတ်လိုက်တော့ လမ်းဘေးတစ်နေရာသို့ အကျမတော် မျက်နှာနှင့် မြေပြင်အရိုက်။ အသားကုန် ပြေးသွားရပြီ ပေါ့...ဖြစ်ပျက်သမျှ ဘာမှမကူညီလိုက်နိုင်ခြင်းက ရင်ထဲစိုးရိမ်စိတ်ကို သည်းထန်စေပါတယ်။
“ဘိုဘို!!” ကပိုကရိုလဲနေတဲ့ သူ့ခန္ဓာကိုယ်ကို ပခုံးကနေဆွဲထူမကာ ရင်ခွင်ထဲထွေးပွေ့မိရရင်း အသည်းအသန်ခေါ်နေမိသည်လေ။ အိုး…. ဘိုဘို့မျက်နှာနုနုမှာ…..အာ…..နှာခေါင်းကနေ သွေးတွေစီးကျနေတာပဲဗျ။
“ဘိုဘို….ဘိုဘို ငါ့ကိုစကားပြောကွာ….ဘိုဘို…..တစ်ခုခုပြောကွာ….Oh God!! ဘိုဘို ငါ့ကို တစ်ခုခုပြန်ပြောလေကွာ….ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ပြော” စိုးရိမ်စိတ်နှင့်အတူ ဘိုဘိုခန္ဓာကိုယ်ကို ပွေ့ညှစ်လှုပ်ခါမိပါတယ်။ ချစ်သူငယ်ချင်းလေး ဆိုးဆိုးရွားရွားနာကျင်ထိခိုက်မှုတွေ မဖြစ်ပါစေနဲ့။
“ငါ ဘာမှမဖြစ်ဘူး မြတ်သူ!!” အညိုရောင်မျက်ဝန်းတွေ ပွင့်ဟလာပြီး စကားပြန်ပြောပါရဲ့။ ပွေ့ဖက်ထားမိတဲ့သူ့လက်တွေကို အသာ လှုပ်ရှားကြည့်ရင်း “ငါ့လက်….ငါ့လက်ကျိုးသွားသလားမသိဘူး နာလိုက်တာ” ဘိုဘိုတစ်ယောက် နာနာကျင်ကျင် ညည်းတွား ပါတယ်။
မြေပြင်ပေါ်လဲကျနေတဲ့ဘိုဘို့ကို ငြင်ငြင်သာသာ ဆွဲပွေ့ထားမိပေမဲ့ အတော်စိုးရိမ်သွားမိတာအမှန်ပါပဲ။ မျက်လုံးကိုဖွင့်စကားပြန်ပြောပြီး တုန့်ပြန်မှုလုပ်တော့ ၀မ်းသာရမှုက နှိုင်းမရပါလားလေ။
သူ့ကိုဖက်ထားတော့ ပြန်လည်ထွေးဖက်ခံရသလို ပခုံးပေါ်မေးတင်ပြီး ထိတ်လန့်မှုက လွတ်မြောက်ကာစ ငိုကြွေးမှုနှင့် ဖြေလျော့ပါတော့တယ်။ ဘိုဘို ကံကောင်းထောက်မစွာ အသက်ဘေးက ကင်းလွတ်ခဲ့ရ တာကို နှစ်ဦးသား မယုံနိုင်ကြသေးဘူး။ “ဒုန်း” ကားတံခါးပိတ်သံ….အိုး…..ကားတံခါးပိတ်သံကိုကြားမှ ကုန်တင်ကားမောင်းသူကို နှစ်ယောက်လုံး သတိပြုမိရတယ်။ ကားသမားမျက်လုံးကို ဖမ်းကြည့်ဖို့ ကြိုးစားကြတာ သူ…..ညိုညိုမောင်းမောင်း ထွားထွားကြိုင်းကြိုင်း ဒီလူကြီး လမ်းလျှောက်လာတာကိုက မြင့်မြင့်မားမား၊ မျက်လုံးတွေက စူးစူးရဲရဲ။ သူ့ကားကို အသားကုန် ဘရိတ်ဖမ်းလိုက်ရလို့ ဒေါသ ထွက်နေမလား? ဘယ်သူမှ ထိခိုက်မှု မရှိလို့ သူဝမ်းသာသွားသလား?
ဘိုဘိုအပါအ၀င် နှစ်ယောက်သားရဲ့ ဦးခေါင်းတွေက ကားသမားဆီမှာ မျက်နှာမူထားရတာက အဲ့ဒီလူရဲ့ body language ကနေတစ်ဆင့် သူ့သဘောထားကို သိမြင်လိုကြခြင်းပေါ့နော်။
တကယ့် ဘီလူကြီးပါပဲ မြေပြင်ပေါ်ထိုင်နေတဲ့ ကိုယ်တွေနဲ့ယှဉ်ကြည့်မိရင်လေ။ နှစ်ယောက်သားကို မိုးနေတာပဲ ဘေးမှာလာရပ်ပြီး ကြည့် တာ။
ကားသမားဆီက စကားသံကြားမှ သူ့ကိုကြည့် အတွေးဝင်နေတာတွေပြတ်တောက်သွားကြပါတယ်။ “ဟေ့ကောင်လေးတွေ အားလုံး အဆင်ပြေရဲ့လား? မင်း…ခုန်ဆုတ်လိုက်တာကောင်းသွားတယ်၊ မင်း အဲ့သည်နေရာမှာ ရပ်နေတာ ရုတ်တရက် သတိမထားမိလိုက်ဘူး ကွာ”
“ဟုတ်ကဲ့၊ ကျွန်တော်လည်း ထင်ပါတယ် အဲ့သည်လို” ဘိုဘိုက ခပ်ဖြေးဖြေးနှင့် ယုံကြည်မှုရှိရှိလေသံမျိုးနှင့် ပြန်ပြောလိုက်တယ်။
“ မင်း လက်ဘာဖြစ်သွားတာလဲ?” သူ ဘိုဘို့လက်ကိုသတိပြုမိသွားပြီးနောက်အမေးထုတ်တယ်။ လက်ကိုဆုပ်ကိုင်ထားပြီး ကြောက်လန့် နေတဲ့ မျက်နှာတွေကို သတိပြုမိသွားတယ်ထင်ပါရဲ့။
“ဟုတ်တယ် ထင်တာပဲဗျ” သူ့ရဲ့ဘယ်ဘက်လက်ကို ညာလက်နှင့်ထိန်းကိုင်ရင်း ဘိုဘိုကပြန်ပြောတယ်။ “နာတာများ တကယ့်ကို မခံစားနိုင်လောက်အောင်ပါပဲဗျာ”
“အိုကေ၊ မင်းလက်မောင်းကော နာနေသေးလား?”
“မင်း….ငါ့ကို ကိုထူးလို့ခေါ်လို့ရပါတယ်။ ငါတို့ မင်းမိဘတွေကိုအကြောင်းကြားပြီး ဘယ်လိုဖြစ်ကြတယ်ဆိုတာ ရှင်းပြကြရအောင်လား? မင်းတို့ထဲက တစ်ယောက်ယောက်များ လက်ကိုင်ဖုန်းပါကြလားကွ”
“ဟာ….မလုပ်ပါနဲ့ ကျွန်တော့်မိဘတွေကို အကြောင်းမကြားပါနဲ့ဗျာ” ဘိုဘို ပြာပြာသလဲဖြစ်သွားတယ်။ “ကျွန်တော်….ကျွန်တော် သူတို့ကို စိတ်မပူစေချင်ဘူးဗျာ”
“ဘိုဘို??” မေးခွန်းထုတ်တဲ့ လေသံနှင့်သူ့ကိုခေါ်လိုက်မိတယ်။
“မြတ်သူ……ငါတောင်းပန်ပါတယ် မြတ်သူရာ….ဒီအကြောင်းတွေကို သူတို့မကြားစေချင်ဘူးကွာ”
“မရူးစမ်းနဲ့ဘိုဘိုရာ….သူတို့ မကြာခင်မှာ သိသွားကြမှာပဲလေ”
ကုန်တင်ကားမောင်းသမားက “ကောင်းပြီလေ….ဒါပေမဲ့ ဆေးရုံကိုတော့ ငါလိုက်ပို့ပါရစေ ကောင်လေးတွေ” တဲ့ စကားစကိုဖြတ်ပေးပါရဲ့။
“ဟုတ်ကဲ့ပါ…… ကိုထူးကိုအလုပ်တော့မရှုပ်စေချင်ပေမဲ့ ကူညီပါဦးဗျာ”
“ဟုတ်တယ်” ဘိုဘိုက စကားကြားဖြတ်ပြောတယ်။ “ဟုတ်တယ်ဗျာ….. ကျွန်တော့်ကို ကားပေါ်ပွေ့ချီပြီးတင်ပေးပါလားဟင်”
“တကယ်လားကွ” ကိုထူးကအသိအမှတ်ပြုလက်ခံလိုက်တယ်။ “အနည်းဆုံးတော့ ငါ ဒါလေးကို အကူအညီပေးနိုင်ရမှာပေါ့”
မကြည်သာတဲ့အကြည့်တစ်ချက်ပေးပြီး ကိုထူးသယ်ဆောင်ရာကို ဘိုဘိုလိုက်ပါသွားတယ်။ သူ့ဖာသာ မကြည်ကြည့်လည်း လျစ်လျူရှု ကာ နောက်ပါးက ထပ်ကြပ်မကွာလိုက်သွားရတာပေါ့နော်။
ဆေးရုံရောက်တော့ ဘိုဘို့ကို သူနာပြုတွေက ပြုစုကုသနေတုန်း အခန်းပြင်မှာ မငြိမ်သက်သောစိတ်တွေနှင့် ခပ်ငြိမ်ငြိမ် ထိုင်နေရ ပါတယ်။ ကိုထူးက မြို့ကြီးဆီ ဆက်သွားရမှာကြောင့် နှုတ်ဆက်ထွက်ခွာသွားလေရဲ့။ သူကတော့ သူ့အစီအစဉ်အတိုင်း လှုပ်ရှားသွားပြီ။ ဖြူဖွေးတဲ့ ဆေးရုံကြမ်းပြင်ပေါ် ရှူးဖိနပ်ထိပ်လေးနှင့် စည်းချက်လိုက်သလို ခေါက်လိုက် ဘာမှလုပ်စရာမရှိမဲ့အတူ ထိုင်လိုက်၊ ထပြီး ဟို သည်လမ်းလျှောက်လိုက်နဲ့ လုပ်နေရပါတယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်လိုက်တော့လည်း ပျင်းစရာကောင်းတဲ့ ပညာပေး ပိုစတာတွေ ကပ် ထားတဲ့နံရံတွေရယ်၊ နေမကောင်းလွန်းလို့….အရေးပေါ်ဖြစ်ရပ်လေးတွေကြောင့် လာကြတဲ့ လူအချို့ကို လူနာကုသခန်းအပြင်မှာတွေ့ ရပါရဲ့။ လူနာတွေနှင့် လိုက်ပါလာသူတွေ စောင့်ဆိုင်းနေရတဲ့ အခုအခန်းကလည်း အင်း….ဟော အခန်းထောင့်နားမှာ ပိုက်ဆံပေးပြီး ဆက်လို့ရတဲ့ အခပေးဖုန်းတစ်လုံးရှိနေတာပဲဗျ။
ဘိုဘို့ကို ခေါ်ရအောင်….ပြီးတော့ ဖျောင်းဖျလို့ရ အောင် လုပ်နိုင်တာဆိုလို့….အင်း။ အိပ်ကပ်ထဲ စမ်းလိုက်တော့ ငွေအကြွေတွေနည်းနည်းရှိတာကြောင့် သက်ပြင်းချမိပါရဲ့။ ဘိုဘို့မိဘတွေကို အနည်းဆုံး အဆက်အသွယ် တော့ လုပ်သင့်တယ်လေ ဘယ်ရောက်နေတယ် ဘာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာပြောပြဖို့။
ဘိုဘို့မိဘတွေကို ဖုန်းခေါ်ဖို့စဉ်းစားလိုက်တော့ သူ့မိဘတွေကို ဘာအကြောင်းကြောင့် မခေါ်စေချင် အသိမပေးစေချင်တာလဲ တွေးမရ ပါဘူး။ ဘိုဘို့စိတ်အတွင်းပိုင်းမှာ ဘာတွေများ ထဲထဲဝင်ဝင်ခံစားနေပါလိမ့်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေ လောလောဆယ် ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ အခြေ အနေတွေက မိဘတွေအနေနဲ့ သိသင့်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးလား။ ဟုတ်တယ်….အကြောင်းကြားပြီးခေါ်ရမယ်။
ဖုန်းရှိရာဆီကို လှမ်းသွားလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ဖုန်းနံပါတ်တွေကို နှိပ်နေစဉ်ခဏ “ကောင်းသွားပြီ၊ မင်း…ပတ်တီးစ အလဲအလှယ်လုပ်ဖို့ တစ်ပတ်နှစ်ကြိမ်လောက်တော့လာခဲ့ဦး။ နှစ်ပါတ်လောက်တော့ မင်းကိုကြည့်ပေးရမယ်”
ဆိုတဲ့အသံကိုကြားလိုက်ရတယ်။ အဲဒီအသံက တွေးနေတဲ့ အတွေးကိုဖြတ်တောက်ပြီး တကယ့်အစစ်အမှန်ကမ္ဘာထဲပြန်ခေါ်ဆောင်လာပါရော။ လုပ်လက်စအလုပ်ကို ဘယ်လိုတုန့်ပြန် ရမှန်းတောင်မသိတော့။
“ဟုတ်ကဲ့…ကျေးဇူးပါဆရာမ” ဘိုဘို သူနာပြုဆရာမကြီးကို ကျေးဇူးစကားဆိုပြီး ထွက်လာပြီ။
ကိုင်ထားတဲ့ဖုန်းလက်ကိုင်ကို ခွက်မှာနေသားတကျပြန်ထားကာ ဘိုဘိုထွက်လာမယ့် အခန်းဝနားအမြန်ကပ်လိုက်ရတယ်။
“ဘယ်လိုဖြစ်တာတဲ့လဲ?” ဘာမှမဖြစ်သလို ဘာမှမလုပ်ထားသလို အမူအရာနှင့် မေးခွန်းထုတ်လိုက်တာပါ ဘိုဘို့ကို။ ဒါပေမဲ့ လုပ်သမျှ အားလုံး သူသိနေတယ်။
“မင်း….ဖုန်းမခေါ်တော့ဘူးလား?” ဘိုဘို့လေသံက စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်နေဟန်နဲ့။ သူ့ကိုတုန့်ပြန်စကားမဆိုမိဘဲ ခဏတော့ ရပ်နေမိပါတယ်။ ပြီးတော့မှ မျက်နှာမှာ ဘာခံစာချက်မှ မရှိဟန်ပြုကာ လုပ်ဆောင်စရာရှိတာတွေကို စတင်လုပ်ဆောင်ရတော့တာ ပေါ့နော်။ ဘာလုပ်ခဲ့တယ် ဘာလုပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်ဆိုတာကို ဖုံးကွယ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့သေးပေမယ့် အမှန်စကားဆိုဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက် ရပါတယ်။
“ဟူး……” သက်ပြင်းငွေ့ငွေ့ချက်လိုက်မိသည်ပေါ့နော်။ “မလုပ်ပါဘူးကွာ……ဒါပေမဲ့….လုပ်မိတော့မလို့ပါ”
ဆေးရုံကြမ်းပြင် ဖြူဖြူဖွေးဖွေးပေါ်က ကိုယ်ဟန်အမူအရာတွေကိုကြည့်ပြီး ဘာဆိုလိုတယ်ဆိုတာ ဘိုဘို သတိပြုမိနိုင်ပါရဲ့။ ဒါပေမဲ့ သူ စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ပြီး လျစ်လျူလျှုနေဟန်ပဲဗျာ။
“ဒါပေမဲ့….မင်း….ငါ့ကို ကတိပေးထားတယ်လေ မြတ်သူ။ ဘာတစ်ခုမှမလုပ်ဘူး ငါသဘောမတူရင်လို့လေ။ မင်းငါ့ကို ညာခဲ့တာပဲ”
ဒီအချိန် ဒီအခိုက်အတန့်လေးမှာ……ဘာတွေရှုပ်ရှက်ခတ်မိပြီလဲ သတိပြုမိသွားရပါတယ်။ ဘိုဘို့စိတ်ထဲက နာကျင်မှု၊ ပြီးတော့ ရှက်ရွှံ့မှု စတာတွေ အာရုံခံမိရပါပြီ။
“ငါတို့နှစ်ယောက်ကြား ဒါတွေမဖြစ်ခဲ့ဖူးဘူး ထားလိုက်ကွာ”
“ကောင်းတယ်…..မင်းတွေးနေတာ အားလုံးမှားတယ်။ ကြည့်…..ဘယ်လိုကိစ္စမှ မရှိဘူး။ အိမ်ပြန်ကြစို့။ ငါ ပင်ပန်းနေပြီ။ ငါတို့ မနက်ဖြန်မှ စကားဆက်ပြောကြတာပေါ့”
ဘာမှကို မပြောမိတော့ပါ။ ဘာမှကို မပြောနိုင်တော့တာပါပဲ။ ရင်ထဲဟာတာတာဖြစ်မိတဲ့အထိ ရှက်စိတ်ဝင်မိပါပြီ။ ဆေးရုံကနေ အပြန်လမ်းကို ဦးတည်တဲ့ ကာလတလျှောက် တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်။ ဒီလူငယ်လေးနှစ်ယောက် ဘယ်ကိုသွားပြီး ဘာတွေဖြစ်ခဲ့ကြ တယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းအရာတွေအားလုံး သိချင်ကြမယ့် အိမ်နီးနားခြင်းတွေရှိရာကို ပြန်ဖြစ်ခဲ့ကြခြင်းပေါ့။ အိမ်အပြန်လမ်းတလျှောက် တစ်ယောက်နှင့် တစ်ယောက် စကားတစ်လုံးတစ်ပါဒမှမပြောဖြစ်ကြ။ နှစ်ယောက်သားကြား ပြောစရာ စကားမဲ့နေကြခြင်းဖြစ်မှာ။
နှစ်ဦးသားကြားပြဿနာနံပါတ်စဉ်တွေ စီကာစဉ်ကာတွေက ရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးလေ။ အချိန်လည်းမဟုတ် နေရာဒေသလည်း အရေးမပါ မလိုအပ်။ ဘိုဘိုရော နှစ်ယောက်စလုံး မောပန်းနွမ်းလျနေကြပြီမို့။ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်သတ္တပါတ်ကာလဟာ ဘာတွေများ အကျိုးထူးခဲ့ သို့မဟုတ် ဘာများ ထူးဆန်းခဲ့ပါသလဲ....ဟူး...။
အချိန်လိုအပ်တယ် - တွေးဆဖို့အချိန် - ညှိနှိုင်းဖို့အချိန်။ အနာဂါတ်မှာ နှစ်ဦးသား ဘယ်လိုရှေ့ဆက်ကြမယ်ဆိုတာ ဆုံးဖြတ်ရမယ့် အချိန်။ ပြီးတော့ နှစ်ဦးသား စိတ်ဆန္ဒတွေဟာ ဘာတွေများ ဆက်လက်ဖြစ်တည်ကြမှာပါလိမ့်။ အရာအားလုံးဟာ အလျင်အမြန်ကို ဖြစ်တည်လာပါပြီ။ ခပ်ကြမ်းကြမ်းမွှေ့ရမ်းနေတဲ့ လေမုန်တိုင်းထဲကို ခုန်ဝင်လိုက်ခြင်း သို့မဟုတ် ဖန်တီးမိကြခြင်းကဲ့သို့ပါ။
Alex Aung (4 Feb 2013)
စာကြွင်း။ ။ Help ဇာတ်လမ်းကို လပေါင်းကြာရှည်မရေးဖြစ်ဘဲ ပစ်ထားမိခြင်းအတွက် အချို့သောစောင့်ဖတ်သူများကို တောင်းပန်ပါ ရစေ။ အချစ်ဆိုတဲ့ စိတ်ခံစားချက်ကို နစ်ဝင်ခံစားဖို့ ကျွန်တော့်အတွက် ခက်ခဲနေတဲ့အချိန်ကာလရှည်ကိုဖြစ်သန်းနေရခြင်းကြောင့် ဆက်လက်မရေးသားဖြစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်လမ်းကို အဆုံးသတ်ဖို့အတွက် နောက်ထပ်အခန်း(၂)ခန်းကျန်ပါသေးတယ်။ ကြိုးစား ရေးသားသွားမယ်လို့ ကတိပြုပါတယ် စာဖတ်သူတို့ရေ။